Fitokonana – Mandrahona ny tsy hiandry raharaha mihitsy ireo dokotera - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
Fitokonana – Mandrahona ny tsy hiandry raharaha mihitsy ireo dokotera
Nilaza ny tsy hanatanteraka na dia fiandrasan-draharaha aza mandritra ny 48 ora ny alakamisy sy ny zoma izao ireo mpitsabo eo anivon’ireo hopitalim-panjakana izay manao fitokonana, raha toa ka tsy mivaha ny olan’izy ireo. Ireo mpitsabo mpanampy koa anefa efa tsy miasa. Ahiana hikatona tanteraka araka izany ny hôpitalim-panjakana.
Omaly aloha dia nanatanteraka hetsika fampisehoan-kery ka nilahatra nitety tanàna, sady nilanja sora-baventy no nanao tampim-bava ireo dokotera mpitsabo.
« Tsy hitan’ny olona mihitsy izahay mihidy ao amin’ny hopitaly ka mba nivoaka kely nitaona ireo namana », araka ny fanazavan’ny Dr Ndatason Fréderic, filohan’ny sendikan’ny mpitsabo. Nitaona ireo dokotera tetsy amin’ny »Intsitut Analakely » sy ireo tao amin’ny hopitalin’ny zaza ao Tsaralalàna ireto mpitsabo ireto.
Herinandron’ny ati-vava – Mety hahafaty ireo ankizy madinika ny areti-nify Tsy tokony hatao tsinontsinona. Matetika no sokajian’ny olona ho toy ny aretina madinika ny aretin’ny ati-vava sy ny areti-nify. Isan’ny aretina mety hahafaty haingana, indrindra ho an’ireo ankizy madinika anefa ity aretina ity. Nivoitra izany omaly nandritra ny fankalazana ny herinandrom-pirenena momba ny fahasalaman’ny ati-vava sy ny nify, natao tany Imerin’Imady, distrikan’Ambositra. “Betsaka sady maro
Fanadinana BEPC – Hanomboka amin’ny 27 mey ny adina ara-panatanjahantena Tokony efa hiomana amin’ny fiatrehana ny fanadinana ara-panatanjahantena ireo mpiadina Bepc. Hanomboka amin’ny alatsinainy 27 mey ka hatramin’ny 30 mey ny anjaran’izy ireo. Hitohy ny alatsinainy 3 jona izany ka hatramin’ny 7 jona. Hitsinjara amina kianja telo ireo mpiadina manodidina ny 27 000 araka ny vaovao avy amin’ny fari-piadidiam-pampianarana Antananarivo reni- vohitra, dia ny kianjan’i
Fifamoivoizana an-drenivohitra – Taratasina fiara miisa 500 nogiazana tao anatin’ny 45 andro Tsy manara-dalàna daholo. Ahitana tsy fanarahan-dalàna hatrany eo amin’ireo fiara mifamezivezy eto an-drenivohitra. Tsy ny taksibe sy ny fiarakaretsaka ihany no manao izany fa eo ihany koa ny fiaran’olon-tsotra. « Nahatratra 500 ny taratasina fiara notanana nanomboka tamin’ny volana avrily ka hatramin’izao. Tsy fijanonan’ny taksibe amin’ny toeram-piantsonana no tena betsaka amin’ireo. Eo ihany koa ny hadisoan’ny
Fetin’ny Pantekosta – Ho tsara sady hafana ny faran’ny herinandro Tsara andro. Hilamina indray ireo manana fikasana hitsangantsangana mandritra ny fetin’ny Pantekosta. Hanomboka hafana indray mantsy ny andro ary hisinda ihany koa ny erika, raha ny fampitam-baovao avy amin’ny sampan-draharaha mpamantatra ny toetr’andro. “Hiova hiakatra kely indray ny mari-pana manomboka rahampitso. Mety haharitra eo amin’ny efatra andro eo izany hafanana izany ka hiverina amin’ny volon’ andro mangatsiaka kely avy eo. Tsy hisy ihany koa ny erika noho ny fisindan’ny rivotra mangatsiaka avy amin’ ny tsioka atsimo. Mbola ao anatin’ny vaninandro
Fitokonana, Mpanoratra Rijakely, 05.07.2012, 09:12	FIARAHAMONINA